Etcher: ngwa ahụ ịchọrọ ịdekọ sistemụ arụmọrụ maka Pipe Pi na SD | Akụrụngwa n'efu
Etcher: ngwa ahụ ịchọrọ ịdekọ sistemụ arụmọrụ maka Rasberi Pi na SD
Mgbe ịzụrụ otu n'ime nsụgharị nke Utu Pi osisi, otu n'ime ihe ị ga-eme bụ ịkwadebe SD kaadị ebe nchekwa nke na ọ nwere a bootable sistemụ dakọtara na nke a SBC osisi. N'ihi na nke ahụ ga-ekwe omume, e nwere ọtụtụ ngwaọrụ, ọ bụ ezie na otu n'ime ndị kasị ewu ewu na na m nwere ike ikwu bụ Etcher ma ọ bụ balena. Na ya ị ga - enwe ihe niile ịchọrọ iji kwadebe os gị na SD n'ụzọ dị omimi na ngwa ngwa.
I kwesiri ima na enwere otutu sistemụ arụmọrụ nke akwadogoro ya na osisi Pi Pi. Ọtụtụ nkesa GNU / Linux na-akwado ARM ma nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma na Pi. Also nwekwara sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ na-emeghe emeghe nke na-esiteghị na kernel Linux ma bụrụ ndị pụrụ iche maka Raspberry Pi, dịka RISC OS, RaspBSD, wdg. Younwere ike ịchọta ụfọdụ maka ojiji a kapịrị ọnụ dịka Windows IoT, OpenELEC ịtọlite ​​ebe mgbasa ozi, RetroPi maka egwuregwu ochie, wdg.
2 Gịnị bụ Etcher?
3 Nzọụkwụ iji balenaEtcher
Ọfọn, ihe ọ bụla sistemụ ị na-ahọrọ, na ọbụna ọtụtụ na otu SD, lma ọ bụ gịnị ka ị ga-eme n'ihi na gị Pi Pi na-agba ọsọ bụ:
Budata sistemụ arụmọrụ gị. Na njikọ m hapụrụ gị ndị isi nke Ụkpụrụ Mgbakwunye Raspberry, ma enwere ọtụtụ ndị ọzọ na isi mmalite ndị ọzọ.
Budata balenaEtcher site na gọọmentị webụsaịtị nke oru ngo a.
Wụnye balenaEtcher na sistemụ gị.
Jiri Etcher ka ọ gabiga onyonyo OS gị na kaadị SD ya mere i nwere ike buut si Pi.
N'ezie, maka nke ahụ, ịchọrọ PC na onye na-agụ akwụkwọ kaadị, SD n'onwe ya (n'ihe gbasara Raspberry Pi ọ ga-abụ microSD) na bọọdụ SBC.
Gịnị bụ Etcher?
Balena mepụtara software a na-akpọkarị Etcher. Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ aha e ji mara ya, a ghaghi ikwu na akpọrọ ya nke ahụ na mbido. Mana e degharịrị ya na 2018 mgbe resin.io gbanwere aha ya balena.io.
Ọ bụ usoro ihe omume n'efu na imeghe n'okpuru ikike Apache 2.0. Mmara ahụ dee faịlụ oyiyi na mgbasa ozi nchekwa. Ha na-abụkarị ihe oyiyi nke sistemụ arụmọrụ dị ka ISO ma ọ bụ IMG na mgbasa ozi eji eme ihe na-abụkarị kaadị nchekwa SD, ọ bụ ezie na ọ na-akwado ebe nchekwa USB. Nke ahụ bụ, ị nwere ike ọ bụghị naanị iji ya maka SDs maka Raspi gị, kamakwa ịmepụta Live USB, kwadebe Windows 10 nwụnye, wdg.
Na mgbakwunye, ọ bụ sọftụwia ọtụtụ, ebe ọ nwere ike ịrụ ọrụ ma sistemụ arụmọrụ Microsoft Windows, Apple macOS yana GNU / Linux.
N'etiti gị atụmatụ ndị kachasị ama bụ:
Na-akpaghị aka chọpụta mgbasa ozi nke ị na-arịgo ihe oyiyi sistemụ arụmọrụ. Maraworị na ha nwere ike ịbụ ncheta USB ma ọ bụ kaadị SD nke ịtinye n'ime akụrụngwa.
Na-echebe megide nhọrọ draịvụ ike. Nke ahụ bụ, ịkwesighi ichegbu onwe gị dị ka mmemme ndị ọzọ gbasara ịmehie na ịhọrọ draịvụ ike gị yana iburu ya ...
Mee ihe niile usoro na-akpaghị aka ozugbo ịmalitere, na-enweghị itinye ọnụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ọtụtụ mbipụta na mgbasa ozi dị iche iche, dịka ọmụmaatụ maka klas nwere ọtụtụ SBC, ozugbo nke mbụ gwụchara, ọ na-enye gị ohere ịme otu usoro ahụ ngwa ngwa.
N'ọdịnihu, ndị mmepe chọrọ ịgbakwunye nkwado maka ndakọrịta maka nchekwa na-adịgide adịgide. Nke ahụ bụ, nke mere na mgbe ị mepụtara usoro na GNU / Linux distro, ị nwere ike ịchekwa mgbanwe emere na SD ma ọ bụ USB. Nke ahụ na-emepụta nkebi ma ọ bụ ohere n'etiti ebe a na-echekwa ihe niile. Na mkpokọta, mmemme ndị ọzọ dabara adaba na nke a na-enye gị ohere ịhọrọ oke nke nkebi ahụ.
Nzọụkwụ iji balenaEtcher
Ugbu a na ị maara nkọwa nke ngwanrọ a, ka anyị hụ usoro iji ya. Ga-ahụ na ọ dị oke mfe:
download BalenaEtcher na mbipụta ị chọrọ:
Maka Windows: ị nwere nhọrọ abụọ, otu bụ .exe iji wụnye ya na sistemụ gị. Nke ọzọ bụ Portable nke ịkwesighi ịwụnye, ị na-ebudata ya, mepee ya ma ị nwere ike ịgba ya ozugbo.
Maka macOS: Enwere naanị otu nhọrọ, sistemu Apple nwere ike ị wụnye.
Maka Linux: dị ka n'elu, enwerekwa naanị otu nhọrọ. Ọ bụ ngwungwu ụdị AppImage zuru ụwa ọnụ, yabụ nwụnye ga-arụ ọrụ maka nkesa ọ bụla ma mee ya ngwa ngwa. Just ga-agba ọsọ ya ma usoro a ga - ebido.
Ugbu a bụ oge ime wụnye ya. Iji mee nke a, gbaa ngwungwu ị họọrọ. Ewezuga Portable nke na-achọghị ya, dị ka m kwuworo. Ozugbo echichi okokụre ị pụrụ ịmalite.
Gbaa ngwa balenaEtcher na-achọ ya n'etiti ngwa dị nke os gị.
Ya graphical interface dị mfe. O nweghị ihe funahụrụ ya. Ikwesiri ime uzo ato:
Họrọ ihe mbido. Site na ihe nchọgharị faịlụ ị nwere ike ịga ebe ebudatara ihe oyiyi nke sistemụ arụmọrụ ị họọrọ: .iso ma ọ bụ .img.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ kaadị SD ma ọ bụ USB flash drive ebe ịchọrọ ka ọ kwụ.
Wee metụ ọkụ, ya bụ, idetuo ma dozie usoro a họọrọ iji sistemụ ị jiri wee bulie ya.
Chere ka usoro a gwụchaa ma ọ bụrụ na ịgaghị idetu ihe karịrị otu usoro, ị ka nwere ike ịpụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-enwe dị njikere ihe iji nwalee ya na kọmputa ma ọ bụ na Rasberi Pi… gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Etcher: ngwa ahụ ịchọrọ ịdekọ sistemụ arụmọrụ maka Rasberi Pi na SD
Ọ bụ Juan Carlos Fischer dijo
Na njikọ https://www.balena.io/etcher/ ebee ka ụdị dị maka utu?
Zaghachi Juan Carlos Fischer
Gyroscope: ihe ọ bụla ị chọrọ ịma
ATtiny85: microcontroller nke na enye otutu egwuru egwu ...